Jahwareer siyaasadeed oo ka taagan Malaysia; Ra’iisul Wasaaraha oo is-casilay
Jahwareer siyaasadeed oo ku jira Malaysia; Mahathir oo is-casilay
KUALA LUMPUR - Ra’iisul Wasaarihii Malaysia, Mahathir Mohamad ayaa maanta oo Isniin ah shaaciyay inuu xilka iska-casilay xili dalka uu ku jira khilaaf siyaasadeed.
Is-casilaadda Mahathir Mohamad ayaa dhabaha u xaaraysa dhismaha dowlad cusub, oo wadaag ah.
Mahathir Mohamad ayaa warqadda is-casilaadiisa u gudbiyay boqorka Malaysia Yang di-Pertuan Agong, waana laga aqbalay sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in Mahathir sidoo kale iska-casilay xisbigiisa Parti Pribumi Bersatu Malaysia [Malaysian United Indigenous Party], oo uu gudoomiye u ahaa.
Xisbiga ayaa ka biyo diiday inuu qeyb ka noqday dowladda cusub ee lasoo dhisayo, iyadoo uu Mahathir loolan kala dhaxeeyo Anwar Ibrahim, oo madax u ah xisbiga People's Justice Party.
Mahathir ayaa doonayay inuu sameeyo isbahaysi xukuma dalka, kaasi oo meesha ka saaraya Anwar Ibrahim. Lama oga cida noqon doonto Ra'iisul Wasaaraha cusub iyo in la qaban doono doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyay.
Xaaladda isbahaysiga xukuma Malaysia ee Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) ayaa soo wajahay jahwareer kadib markii uu ku guuldareystay dhismaha isbahaysiga cusub oo soo dhisi doono dowladda.
Anwar Ibrahim ayaa looga wacay qasriga boqorka kadib is-casilaadda lama filaanka ah ee Mahathir, waxaana wararku ay sheegayaan inay suurtagal yahay in loo magacaabo xilka Ra’iisul wasaaraha.
Mahathir, 94 jir ah ayaa soo noqday Ra’iisul Wasaaraha 5aad ee dalka Malaysia, laga soo billaabo1981 illaa 2003, xiligaas oo uu howlgab noqday.
Sanadkii 2018, ayaa xilka dib loogu soo celiyay kadib markii uu is-casilay Ra’iisul Wasaarihii hore Najib Razak, kaasoo lagu helay musuq-maasuq malaayiin dollar, oo lagala baxay sanduuqa maal-gelinta dalka.
Warbaahinta Malaysia qaar ayaa sheegay in Mahathir uu qorsheynayo inuu dowlad cusub soo dhiso, isaga oo taageero ka helaya xisbiyo kale oo aan ahayn midka Anwar, sida xisbiga UMNO.
Haddii la waayo isbahaysi heli kara 112 xubnood oo kamid ah 222-ka kursi ee uu ka kooban yahay Baarlamaanka, waxaa la qaban doonaa doorasho cusub, sida uu sheegay qof ku dhow xisbiga Mahathir.
Mahathir ayaa lagu amaaney inuu dalkan dhaca koonfur bari Asia ka dhigay mid kamid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka mudadii dheerayd ee uu xukunka hayay.
Lacag iyo Dahab laga soo saarey Guriga Ra'iisul Wasaarihii hore ee Malaysia
Caalamka 18.05.2018. 19:09
Booliska ayaa wali baaritaan ku haya Najib oo dhawaan loo diiday inuu ka dhoofo dalka...
Mahathir Mohamad oo markale loo doortay Ra'iisul Wasaaraha Malaysia
Caalamka 10.05.2018. 01:24
Ra'iisul wasaarihii hore ee Malaysia oo la xiray [Sababta]
Caalamka 03.07.2018. 13:09
Siyaasiga Anwar Ibraahim oo laga sii daayey xabsi ku yaal Malaysia
Caalamka 16.05.2018. 06:57
Caalamka 05.02.2020. 14:01